आवाजबिहिनहरुको निम्ति राष्ट्रिय स्तरको मिडिया भन्दा सच्चा युट्युबरहरु अरबौं गुणा राम्रो हुन् :ज्वाला संग्रौला ,पढ्नुहोस !सहमत भए शेयर गर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
✍️सामाजिक अभियान्ता ज्वाला संग्रौंला:
केहि साथीहरु यो बच्चा का’ण्डपछि युटुब चलाउनेहरुमाथी अन्धा’धुन्द ख’निएको देख्दा मलाई अ’चम्मै लागेको छ ! हो म मान्छु कि कतिपय यु’टुब चलाउनेहरुले ग़’लत क’न्टेन्ट बेचेर ड’लरको खे’ती गरे होलान्!
तर प्रायजसो यु’ट्युबतिर गाउँ, बस्ती र कु’ना कन्दरामा दुखले बाँचि’रहेका गरि’बहरुको कथा जस्ताको तस्तै राखिएको हुन्छ ! आज देशको मु’लधार भनाउँदा मि’डियाहरु सबका स’ब राज’नितक दलका भ’ट्टी पसल जस्तै बनिसकेका छन् ! नेताले पत्र’कारको मु’खको बि’र्को खोल भने खोलिन्छ बन्द गर भने बन्द हुन्छ ! अनि यहाँ आबाज बि’हिन हरु को आ’वाज युट्युबेले नबो’लेर कस्ले बोल्ने ?
हरेक कुरालाई हामीले गु’ण र दो’षको आ’धारमा हेर्नु पर्छ ! यस प’रिप्रेक्ष्यमा युट्यु’बका धेरै गुण छन् भने केहि अ’वगुण पनि जरुर छन् ! ती अ’बगुणहरुलाई सु’धारेर जान सु’झाब दिने हो ! तर ठूला भनिएका रा’ष्ट्रिय मिडियाहरुको एउटा मात्र गुण देखा’ईदिनुस् जनतालाई !
जतिखेर पनि क्या’मराको फुँ’दो त्यहि बा’लुवाटार र सिंहद’रबारमा जन्ताको पसिना को कमाइ खाएर बसेका सामन्तीहरुको टाउ’को वरिपरि घुमायो, नेताको कन्दनीको फेरमा पिङ खेल्दै फाईभ स्टार होटलमा छिरेर फिरिको खाना खायो , धनुस्टंकार शैलिमा नमस्ते ठोक्यो र जी हजुरी गर्दै इन्टरभ्यु लियो , उ’चाल्यो , प’छार्र्यो , चि’ल्लो द’ल्यो, त’लुवा चा’ट्यो, यी बाहेक अन्य काम के’नै गरेको छ र राष्ट्रिय मि’डियाहरुले?
अहिलेको समयमा सबैले त भन्दिन तर धेरै युट्युबर हरुले कैंयौ गरिब पिडित अस’क्त हरुलाई नयाँ जिवन दिने काम गरिरहेका छन् । रा’ष्ट्रिय मिडियामा चि’लिमे अनुहार टल्काउने एकमात्र पत्र’कारको नाम दि’नुस् मलाई जो ग’रिबको भत्कि’एको घरमा पुग्यो, जो कसैको मृगौला फेर्नुपर्छ भनेर अगाडि सर्यो, जस्ले गरिबको भोको पेट र रित्तो भाँडो अनि चुहिने छा’नोको क’था समेट्यो र उस्लाई घाम पानी हुरी ब’तास नभनि सासै न’फेरि उ’द्गार गर्यो..!
आज दुर’दराजमा एउटा सि’टामोल खा’न नपाएर छ’ट्पटाई रहेका ति दिन दुः’खीहरू उ’पर बालुवाटार सिंहदरबार र संसद भवनमै ब्यस्त रहेका मुलधारे पत्रकारहरुको न क्यामरा तेर्सिन्छ न त कलम नै चल्छ!
रा’ष्ट्रिय मिडि\_याहरु भुँईं’का मान्छेको भो’को पेट, सामन्ती र ठा’लुबर्गले गरेको अत्या’चार, तिनका स’मस्या र आशुको कथा देख्दै दे’ख्दैनन, तिनलाई समा’चार मान्दैनन र पत्रकारको ईथिक्स भित्रै राख्दैनन् ।
कुन पार्टी फुट्यो र जुट्यो, कुन मन्त्री नि’बासमा को पस्यो र क’तिबेला नि’स्कियो, कुन नेता र म’न्त्रीले कहाँ के उद्घाटन/सिल्यान्यास गर्यो, को आईजिपी बन्यो, कसकसलाई शुभ’कामना दिने र चा’करी गर्ने भन्दा बाहेक घरानिया मिडियामा समाचार नै ब’न्दैनन । ज’नताको दुखमा पुग्ने त तिनै युट्युबर नै हुन् ।
राम्रो नराम्रो हेर्नेले नै छुट्याएर हेर्नुपर्छ, हेरिरहेका नै छन् । हामिले तिनको भि’डियो हेरिदिदा तिनलाई पैसा कमाई हुन्छ भने कसैले टाउको दुखाउनु किन ?? त’सर्थ म त भन्छु कि जस्ले गरिब दुखीहरुको दुखेको घाउमा केही छिनलाई भएपनि मल्हमपट्टी लाउछ जनताले उसैलाई माया गर्छन् । कसैले राम्रो क’न्टेन्ट ल्याउँछ र ला’खौं viewers कमाउन सफ’ल हुन्छ भने त्यो उस्को मे’हनतको क’माई हो! किन आँखा गाड्ने म’हिनामा ७ लाख कमायो भनेर ?
आफ्नो दि’माग़ र पाखुराको बलमा मेहनत गरि राम्रो पैसा कमाएर आत्मनिर्भर हुन्छ मेरो जस्तो गरिब देशको कुनै युवा भने म उस्लाई स’लाम गर्छु ! उस्को मेहनत माथी कहिले पनि धावा बोल्दिन र उस्को क’माईमाथी कहिले पनि रा’ल चुहाउँदिन..! साथीहरु अब अरुको कमाई देखेर जल्नु भन्दा पनि , आफूलाई आ’त्मनिर्भर बनाउन तिर लागौं !
कसैले आफू’लाई बिना’कारण ज्या’दती गर्यो भने देशमा अझै का’नुन छ , का’नुनी ढंग’बाट अ’गाडि बढौं! कसैको सानो गल्तीलाई प’हाड़ बनाएर तँ’लाइ का’ट्छु, कि तँ छैनस् कि म छैन , नेपाल आईज न तेरो लुगा च्या’त्छु भन्ने जस्ता फु’स्रा ध’म्की कसै’लाई पनि नदिउँ!
नेपाल कसैको बा’उको अँस न आ’माको दाईजो..! यहाँ सबैको बरा’बरी अधिकार छ ! त’सर्थ स’मग्रमा अर्को मा’न्छेको पनि अ’स्तित्वलाई स्वी’कार्दै अगाडि ब’ढौं..! तर राम्रो काम गर्नेहरुको खेदो खनेर बारम्बार फ़ेस’बुक लाईभमा डुक्रँने र न’कारात्मक कुरा ले’खेर सं’जाल दु’षित पार्नेहरुलाई चाहिँ बिच बिचमा कट्टा हान्न पनि पछि नपरौ ! धन्यबाद ! 🇳🇵🇳🇵
Previous प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ : राम जन्मभूमि अयोध्याबारे बलियो प्रमाण भेटिएको छ, काम अघि बढाऔं
Next माडीका वडाध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन,अयो,ध्यापुरीको काम के हुँदै छ ? …हेर्नुहोस।